चौथो र अन्तिम सिद्धान्त जसले तपाईंको सोचलाई डोऱ्याउन सक्छ कानून र सार्वजनिक हितको लागि सम्मान हो। यो सिद्धान्त मेनो रिपोर्ट बाट आउँछ, र त्यसैले सोशल शोधकर्ताहरूलाई कम राम्ररी चिन्न सकिन्छ। मेनोलो रिपोर्टले तर्क गर्दछ कि कानुन र सार्वजनिक हितको आदरको सिद्धान्त भक्तिको सिद्धान्तमा निहित छ, तर यो पनि तर्क गर्दछ कि पहिले स्पष्ट स्पष्ट विचार छ। विशेष गरी, जबकि प्रतिभागी प्रतिभागिहरु मा ध्यान केन्द्रित हुन्छ, कानून र सार्वजनिक रुचि को आदर को स्पष्ट रूप देखि शोधकर्ताओं को एक व्यापक दृष्टिकोण ले र कानून को उनको विचारहरुमा शामिल गर्न को लागि प्रोत्साहित गर्दछ।
मेनोलो रिपोर्टमा, कानुन र सार्वजनिक रूचिको आदर आदर दुई फरक घटकहरू छन्: (1) अनुपालन र (2) पारदर्शिता-आधारित जवाबदेही। अनुपालनको अर्थ छ कि शोधकर्ताहरूले प्रासंगिक कानुन, अनुबंध र सेवा सर्तहरू पहिचान गर्न र पालन गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, अनुपालन भनेको अर्थ हो कि एक वेबसाइटको सामग्री scraping विचार गर्ने एक शोधकर्ताले त्यो वेबसाइटको सर्त-सेवा-सेवा सम्झौता पढ्न र विचार गर्नुपर्छ। तथापि, हुन सक्छ, स्थितिहरू जहाँ सेवा सर्तहरूको उल्लङ्घन गर्न अनुमति छ; याद गर्नुहोस्, कानून र सार्वजनिक रुचिको लागि सम्मान चार सिद्धान्तहरू मध्ये एक मात्र हो। उदाहरणको लागि, एक पटक, दुवै Verizon र AT & T सेवाका सर्तहरू थिए जुन ग्राहकहरूलाई उनीहरूको आलोचना गर्ने (Vaccaro et al. 2015) । मलाई लाग्छ कि शोधकर्ताहरू यस्ता शर्तहरू-सेवा-सेवा सम्झौताहरू द्वारा स्वचालित रूपमा बाँध्नु हुँदैन। आदर्श रूप मा, यदि शोधकर्ताहरूले सर्त-सेवा-सेवा सम्झौताको उल्लङ्घन गरेमा, उनीहरूले उनीहरूको निर्णय खुला रूपमा Soeller et al. (2016) (उदाहरणका लागि, Soeller et al. (2016) ), जस्तै पारदर्शिता आधारित लेखा- Soeller et al. (2016) सुझाव दिएका छन्। तर यो खुलापनले शोधकर्ताहरूलाई थप कानूनी जोखिममा ल्याउन सक्छ; संयुक्त राज्यमा, उदाहरणका लागि, कम्प्युटर धोखा र दुर्व्यवहार अधिनियमले यसलाई सर्त-सेवा-सेवा सम्झौता (Sandvig and Karahalios 2016; ??? ) उल्लङ्घनको लागि अवैध बनाउन सक्छ। यस छोटो छलफलमा नैतिक विचारधाराको अनुपालन सहित जटिल प्रश्नहरू बढ्न सक्छ।
अनुपालनका अतिरिक्त, कानून र सार्वजनिक रुचिको आदरलाई पनि पारदर्शिता-आधारित जवाबदेही प्रोत्साहित गर्दछ, जसको अर्थ हो कि शोधकर्ताहरूले उनीहरूको अनुसन्धानको सबै चरणहरूमा आफ्नो लक्ष्य, विधवाहरू र नतिजाहरू स्पष्ट हुनुपर्छ र तिनीहरूको कार्यको जिम्मेवारी लिन्छन्। पारदर्शिता-आधारित जवाबदेहीको बारेमा सोच्ने अर्को तरिका यो हो कि अनुसन्धान समुदायलाई गोप्य कुरा गर्नदेखि रोक्न प्रयास गरिरहेको छ। यो पारदर्शिता-आधारित जवाबदेही नैतिक बहसहरूमा जनताको लागि ठूलो भूमिका सक्षम बनाउँछ, जुन नैतिक र व्यावहारिक कारणहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
कानुनी र सार्वजनिक हितको लागि सम्मानको सिद्धान्त लागू गर्दै यहाँ तीनवटा अध्ययनहरूको लागि यहाँ मानिन्छ कि जटिलताले गर्दा केही जटिलताहरू सामना गर्दछ। उदाहरणका लागि, Grimmelmann (2015) ले तर्क गरेको छ कि मेरीियाली राज्यमा भावनात्मक कोट्याग हुन सक्छ। विशेष गरी, सन् 1981 मा म्यार्यल्याण्ड हाउस विधेयक919मा पारित म्याथल्याण्डमा आयोजित सबै अनुसन्धानको लागि सामान्य नियम सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यसका लागि धेरै विशेषज्ञहरूले विश्वास गर्छन् कि भावनात्मक कङ्गन संघीय कानुन अनुसार सामान्य नियमको अधीनमा थिएन किनभने यो फेसबुकमा आयोजित गरियो , एक संस्था जसले अमेरिकी सरकारबाट अनुसन्धान कोष प्राप्त गर्दैन)। तथापि, केहि विद्वानहरूले विश्वास गर्छन् कि मैरील्याण्ड हाउस विधेयक 917 आफैं असंवैधानिक हो (Grimmelmann 2015, 237–38) । सोशल शोधकर्ताहरू अभ्यास गर्दै न्यायाधीशहरू छैनन्, र यसैले सबै 50 अमेरिकी राज्यका कानुनको वैधतालाई बुझ्न र मूल्याङ्कन गर्न सुसज्जित छैनन्। यी जटिलताहरू अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा जटिल छन्। दोहोरो, उदाहरणका लागि, 170 देशहरूबाट सहभागीहरू संलग्न छन्, जसले कानुनी अनुपालन अविश्वसनीय रूपमा बनाउँछ। अस्पष्ट कानुनी वातावरणको प्रतिक्रियामा, शोधकर्ताले उनीहरूको कामको तेस्रो-पक्ष नैतिक समीक्षाबाट लाभ उठाउन सक्छन्, दुवै कानूनी आवश्यकताहरु को बारे मा सल्लाह को एक स्रोत को रूप मा र व्यक्तिगत संरक्षण को रूप मा उनको अनुसन्धान अनियमित रूपमा गैरकानूनी रूपमा।
अर्कोतर्फ, सबै तीन अध्ययनहरूले आफ्ना परिणामहरू शैक्षिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गरी पारदर्शिता आधारित लेखा-क्षमतालाई सक्षम पार्छन्। वास्तवमा, भावनात्मक कन्कोगुन खुला पहुँच फाराममा प्रकाशित गरिएको थियो, त्यसैले शोध समुदाय र व्यापक जनसूचना - तथ्य पछि - अनुसन्धान को डिजाइन र परिणाम को बारे मा सूचित गरियो। पारदर्शिता-आधारित जवाबदेहीको समीक्षा गर्न एक द्रुत र कच्चा तरिका आफैलाई सोध्नु हो: यदि मेरो अनुसन्धान प्रक्रिया मेरो घर शहरको अखबारको अगाडिको पृष्ठमा लेखिएको थियो भने मलाई सहज हुनेछ? यदि जवाफ होइन भने, त्यसपछि त्यो एउटा चिन्ह हो जुन तपाइँको अनुसन्धान डिजाइन परिवर्तन हुन सक्छ।
अन्तमा, बेल्मोन्ट रिपोर्ट र मेनोओ रिपोर्टले चार सिद्धान्तहरू प्रस्ताव गर्दछ जुन अनुसन्धानको मूल्यांकन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ: व्यक्ति, भक्ति, न्याय, र कानून र सार्वजनिक हितका लागि आदरको लागि सम्मान। अभ्यासमा यी चार सिद्धान्तहरू लागू गर्न सँधै सरल छैन, र यसले सजिलो सन्तुलन आवश्यक पर्दछ। उदाहरणका लागि, भावनात्मक कन्न्टागिसबाट सहभागीहरूलाई डिबहार गर्ने कि निर्णयको सन्दर्भमा, यो विचार हुन सक्छ कि व्यक्तिहरूको आदरले डिब्रीबाइभलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ, जबकि भवदीयले यसलाई निरुत्साहित गर्छ (यदि डिब्रीबिङले आफूलाई हानि पुऱ्याउन सक्छ)। यी प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्तहरू सन्तुलित गर्न कुनै स्वचालित तरीका छैन, तर चार सिद्धान्तहरूलाई व्यापारिक पक्ष स्पष्ट गर्न मद्दत गर्दछ, अनुसन्धान डिजाइनमा परिवर्तनहरू सुझाव गर्दछ र शोधकर्ताहरूले एकअर्कालाई र जनतालाई आफ्नो तर्क बुझाउन सक्षम पार्छन्।